လူတိုင်းရှိတတ်ပါတယ်။ ရီးစားဦး ဆိုတာတော့ ညားတာ မညားတာကတော့ အပထားပေါ့လေဗျာ။ ဒါပေမဲ့ မညားတာများတယ်ဗျ။ အိမ်ထောင်ကျတယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ မေးကြည့်လိုက်တော့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ မိဘက ပေးစားလို့ လိုလို ကိုယ့်ဘာသာပဲ စွန့်စားတာလိုလိုနဲ့ ရီးစားဦးနဲ့ မရတာ များတယ် ။ တစ်ရာမှာ ၈၈ယောက်က ရီးစားဦးနဲ့ ညားတာမဟုတ်ဘူး ။ အဲထဲမှာ ကျွန်တော်က အဆိုးဆုံးဘဲ ။ သူများတွေ ရီးစားဦးတွေများ ဘုရားသွားရတာနဲ့ ၊ ချိန်းတွေ့ရတာနဲ့ ၊ ငါးစာ သွားကြွေးရတာနဲ့ ၊ ရှောပင်းထွက်ရတာနဲ့ စုံလို့။ ဒီကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။
စကတည်းက ယဉ်သကိုဆိုသလို အိမ်ကခွေး အပြင်ထွက်လို့ လိုက်တာ သူကိုတွေ့တာဘဲ။ အိမ်ကခွေးနာမည်က ဖြူကွတ်တဲ့ ။ နောက်တကောင်က ငမဲလို့ခေါ်တယ် ။ သူကတော့ အာဂန္တုက စာရင်းထဲထည့်လို့ရတယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလဲ နေထိုင်တတ်တယ်။ အိမ်မှာမြဲတာကတော့ အခုပြောတဲ့ ရွှေဖူးစာရေးနတ်ကို ပင့်ဖိတ်ပေးမဲ့ ကိုဖြူကွတ်ဘဲ။ အဲကောင်က ခြံတခါးဖွင့်တာ နဲ့ထွက်တယ်။ ဒီကလဲ ဆယ်တန်းကျောင်းသား ဆိုတော့ ညနေဘက် ကျူရှင်တက်ရမယ်လေ ။ ကျုရှင်က ကိုးမိုင်းရှမ်းရွာထဲမှာ အပြင်ထွက်တော့ တံခါးလေးဟခါရှိသေး ဟိုအကောင်ဖြူကွတ်က ၀ရုန်းသုန်းကားနဲ့ အရင်ထွက်သွားတာ “အောင်မလေး” လို့ အော်သံ အလတ်စားလေး ကြားလိုက်တော့ လူလဲတအားကို ကယ်တင်ရှင် လုပ်လိုက်ချင်စိတ်က တဖွားဖွားပေါ်လာတာကိုး ။ ဟဲ့ဖြူကွတ် ဘာညာအခုဝင်ပေါ့လေ။ ဟုတ်တာမဟုတ်တာ အပထား ဟိန်းဟောက်ပြလိုက်တော့ ။ မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်နဲ့ ခြေစုံရပ်နေတဲ့ သူခြေထောက်ခလေး မြင်လိုက်ရတာ မြတ်စွာဘုရား ရင်ခုန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်း။ ရင်တွေတင်ဘယ်ကမလဲ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ သုံးဆယ်နှစ်ကွတ်ဌာသကို ခုန်တယ်လို့ ကိုပြောရမှာ ။
အာ ..ဆောရီးနော်.. လန့်သွားလားဟင် ရေသောက်မလား…
လူလာတာမမြင်ဘူးလား.. ခွေးရှိရင် ကြိုးနဲ့ချည်ထားရတယ်ဟဲ့
ဟုတ်ကဲ့ လိုက်ပို့ရမလား …ဘယ်နားမှာနေတာ…
ယူ့အပူမပါ ပါဘူး ဘယ်နားနေနေပေါ့ ……….
ဆောင့်ဆောင့်နဲ့ ထွက်သွားလိုက်ပုံများ မဟာပထ၀ီမြေကြီး ဘယ်လိုနေတယ်မသိ ။ ကျွန်တော်ရဲ့ နှလုံးသားဟာ ဒုန်း ဒုန်း ဒုန်း နဲ့ခုန်နေပါတယ်။ သူက ပြောဆိုသွားတာတွေ ဘာတွေမှန်း လုံးစိပတ်စိ မသိလိုက်ပေမဲ့ ကျွန်တော်သိလိုက်တာတော့ စာထဲမှာဖတ်ဘူးတဲ့ ပဉ္စသိဉ္ခနတ်သားရဲ့ ဗေလုဝ နတ်ဆောင်းသံ ဆိုတာ ဒါမျိုးများလား..။ ဟိုနတ်မင်းကြီးမှုတ်တဲ့ သင်္ခါခရုသင်းဆိုတာ ဒီအသံမျိုးလေးနဲ့ တူရဲ့လို့ တွေးနေမိပါတယ်။ ကျောင်းကပြန်လာကတည်းက ဒီအကြောင်းဘဲတွေးတယ် ။ ဒီလမ်းထဲကဘဲ ဖြစ်ရမယ်… စုံစမ်းမှ ဖြစ်မယ် ။ အိမ်ဓားလွယ်ခုတ်မှာက ၀ိဇ္ဇာသိပ္ပံဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရှိတယ်။ ကိုရင်လေးတွေ မေးရင် သိလောက်ရဲ့ဆိုတော့ …သိဘူးတပါးမှ ။
အဲဒါနဲ့ ညဘက် ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ဖွင့် ဟိုတာရာမင်းဝေစာအုပ်ထဲက ကူးထားတဲ့ တေးထပ်လေးကို အဲဒီထဲမှာ ရေးထည့် …။ ဘာတဲ့တေးထပ်က……..
ပိမ္ဗာနတ် ကိန္နရီလို ၊
တသိဂီင်္ ရိုးတော့မမှား ။
ဥမ္မာဒ ရုဇာနှယ် ၊
သမုနွယ် နှုတ်ဖျားက ၊
မြင့်ဆောင်ထီး ညောင်လယ်မှာ ၊
ရွှေမျက်နှာ ကြည်လွန်းလို့လေး ။
နောက်တပတ်ကြာတော့ ၀ိဇ္ဇာသိပ္ပံကျောင်းက ကျောင်းသားက သတင်းပေးတယ် ။ ကျောင်းရှေ့အိမ်ကတဲ့…။ အိမ်နဲ့ဆို လေးအိမ်ကျော်ရှိတော့တာပေါ့ ။ ဒါမျိုးဘာရမလဲ ပန်းစည်းသွားထားမယ် ဆိုပြီး ညကိုးနာရီ အိမ်ကနေတိတ်တိတ်ခလေးထွက် သူတို့ခြံတံခါးမှာ ပန်းစည်းလေးသွားညှပ်ထား… (((အိုး))) ရင်တွေခုန်လိုက်တဲ့ ဖြစ်ချင်း… ဟိဟိ။ မနက်စောစော ဒီဘက်ကို လာကြည့်ရမယ် ။ မိုးလင်းတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲကနေချောင်း အောင်မလေး…ပန်းစည်းလေးကိုယုယုယယကိုင်ပြီး ကိုင်ပေါက်လိုက်ပုံများ ပန်းစည်းမို့ လူသာဆို ဆေးရုံပို့ရလောက်တယ် ။ ဟန်ပန်ကလဲ စူပုတ်ပြီး ပါးစပ်ကလဲ ပွစိပွစိနဲ့ ပုတီးစိပ်နေသလိုဘဲ။ ဟူး မဖြစ်ချေဘူး… တမျိုးကြံအုံးမှ ….။
ဖေဖေ ဇေ ဒီလမ်းထဲက ကောင်မလေးကို ရင်နဲနဲခုန်လို့။
အောင်မယ် ဟုတ်လှချေလား ။ ပါး တောင်မသိပါလားကွ ။
အို မင်းအမေကို လိုက်တုန်းကတော့ တယောသွားထိုးတာဘဲ ။ မိန်းခလေးဆိုတာ ဂီတကြိုက်တယ်ဟ ။
ဘယ်လို သီချင်းမျိုးတွေ ထိုးသင့်တုန်း
အော်ကိုကိုဇေ ငါ့သားသိပ်ညံ့တယ် ။ မင်းကောင်မလေးကဘယ်လိုပုံစံရှိတုန်း ။
အော် …ဒါဆို မာနရှင်သီချင်းသွားထိုးပေါ့ကွ ။
ဒါဆို ပပ၀င်းရတယ်မို့လား ။
အိုကေ……………… ညကျတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်း အုတ်တံတိုင်းဘေးမှာ သီချင်းလေး သွားငြီးတယ်။
အိုကေပြီ…။ ဒီလောက်ဆိုသိရောပေါ့ ။ ဖေဖေ စောင့်နေတယ် ။ (အိုကေလား) အိုကေတယ်ထင်တာဘဲ။ အေးဆေးလုပ်ဟ တဲ့…။ ဒါနဲ့ မာနရှင်သီချင်း တီးဘို့လေ့ကျင့် ။ နေ့စဉ် သူတို့ အိမ်ရှေ့မှာ ခြေယောင်ပြ ပြုံးပြရီပြ ပုံမှန်ဘဲ ။ ဘယ်လိုမှတုန့် ပြန်မလာဘူး။ ဒါနဲ့ ညနေဘက် စွယ်တော် ကန်ဘောင်ဘက်လမ်းလျှောက်….အိုး တွေ့ပြီဟေ့ ။ ထိပ်တိုက်ဘဲ ။ ဘယ်သူမှမပါဘူး ။ ဒီကလဲတဗွေထဲ အိုကေတယ် သူ့လက်ထဲက အထုပ်ထဲမှာ ဒုတ်ချောင်းတွေ အဝေးကမြင်ရတယ် ။ ကိုးရီးယား ဒုတ်ထိုး ထွက်ဝယ်စားတာထင်တယ်။ စားရကံ ကြုံတော့ မုတ်ဆိတ်ပျားဆွဲရုံ မဟုတ်ဘဲ ပျားလဘို့ပါလာချိပ်တာပေါ့ ။
အဲ… အော် အဲလိုတော့လဲမဟုတ်ပါဘူး တလမ်းထဲသားချင်းဆိုတော့ နုတ်ဆက်တာပါ
(အို အင်ထရိုကလဲညက်လှချည်လား) စိတ်ထဲကနေ တွေးမိသွားတယ် ။ ပါးစပ်ကလဲ ဘာမှကိုပြောမထွက်ဘူး ဆင်ဖမ်းမယ်ကျားဖမ်းမယ် ဓါတ်တိုင် သွားကြားထိုးမယ်နဲ့ အခုကြတော့ ကျားရှေ့ရောက်တဲ့ယုန်သငယ်လိုတုတ်တုတ်မျှမလှုပ်ရဲတဲ့ အပြင် အသက်ရှု မရပ်အောင်ဘဲ မနဲထိန်းပြောနေရတယ် ။ ဒူးကလဲချောင်ချင်သလိုလိုလေး ဒါနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ထွက်သွားတော့
(ဟေ့နေအုံး) တော်တော်လေးပျော်သွားပါတယ် ။ ရင်ထဲမှာနှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ လှည့်သလို ပျော်လိုက်တဲ့ ဖြစ်ချင်း ဘာများပြောမလဲမသိဘူး ။ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်…။
“ဟိုက်” ပြောစရာရှိလို့ဆိုပါလား တောင်းပန်မယ်နဲ့တူတယ် မျက်နှာလေးကိုနဲနဲမော့ သည်းခံစိတ်ရှိတဲ့ လူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့ဟန်ပန်လို မျက်နှာကိုနဲနဲပြုံး သွားလေးနဲနဲဖြီး
ယူဟိုဒါကြီးနဲ့ ညဘက်ညဘက်လာလာမဆိုနဲ့ နားယားလို့အဲအသံကြီးကို နောက်ပြီး အိမ်ကလဲဆူတယ်။ ဒီညလာဆိုရင် ယူ့တို့အိမ်နဲ့တိုင်မယ် ယူတို့အိမ်ဖုန်းနံပါတ်ကို စုံစမ်းပြီးပြီ
မဟာပထ၀ီမြေကြီးဟာ ရဟတ်ယာဉ် ပန်ကာလောက်ကို လည်သွားပါတယ်။ လမ်းတောင် ဘယ်လိုဆက်လျှောက်ရမှန်း မသိပေမဲ့ သူကတော့ ဒုတ်ထိုးစားမပျက်ဘဲ ခရီးဆက်သွားပါတယ်။
ပါးပါးသားရာ မင်းကလဲ ဖေဖေသွေး မပါလိုက်တာ။ ပါးတုန်းကလဲ ဒီလိုဘဲဟ ။ နောက်တော့ လက်ခုတ်တွေတောင် တီးကြတာ ။ ဒါနဲ့ နေပါအုံး…။ မင်းကောင်မလေးက တယောတောင် မသိဘူးလား ။ ဟိုဒါကြီးခေါ်ရအောင် ….
အာ ပါး ကလဲဗျာ..။ မဟုတ်တွေမပြောစမ်းပါနဲ့…။ စိတ်ညစ်ရတဲ့အထဲ
ကဲ ဘာမှမပူနဲ့ ဇေ မင်းဒီည ဖိုင်နယ်ဘဲသား ။ ဒီည ကြိုးစားကြည့်လိုက် ဟုတ်ပလား။ ဖုန်းနားမှာ ဖေဖေထိုင်နေမယ် … တိုင်လာရင်လဲ အေးဆေးပေါ့ကွာ ။
အဲ ညက ကျွန်တော် သီချင်းသွားဆိုတယ်။ သီချင်းကတော့ ရပါတယ် ။ တယောက လက်မကျဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဝေ့တာ ၀ိုက်တာ တွေကလဲပါတာကိုး ။
(((မာနရှင်ရယ်..xxx မုန်းမာန်မ၀င်နဲ့ကွယ် xx)))စိတ်ကလဲသီချင်းထဲကို မရောက်ပါဘူး ။ အိမ်ရောက်လိုက် ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်။ ဖီးလ်ကိုမဖြစ်ဘူး ။ ဒါနဲ့ဘဲကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တယ် ။ ဖေဖေ တံခါးလာဖွင့်ပေးတယ် ။ ဖုန်းဆက်လာတယ် သားတဲ့…။ စိတ်ထဲမှာ တော်တော်လေးကို ထိခိုက်သွားပါတယ် ။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော့် ဒိုင်ယာရီထဲမှာ တေးထပ်တပုဒ် ဒီလိုလေး ရေးထည့်ထားလိုက်တယ် ………..။
ဤကာယေ အရိုးစု ၊
ပိုးအထု ရှစ်ဆယ် ။
တရွေ့ရွေ့ကို တောမျောက်အလောင်း ။
သေမင်းက မညှာယူလျှင် ၊
မျက်နှာယုတ် လပ်အုပ်ကွယ်သည် ၊
စက်ဆုပ်ဘွယ် ရှောင်ရှားလို့ ။
အလကားဟာ ကောင်ပုတ်ပလေး ။
အဲဒါကတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ ရီးစားဦး အကြောင်းပါဘဲဗျာ ။ အဲကတည်းက ဈေးဦးပေါက် မကောင်းခဲ့လို့ လားမသိဘူး။ ခုထိကို မစွန်သေးဘူး ဗျို့ ဟဲဟဲ ကြော်ငြာဝင်တာပါ…………………။
Posted by နှင်းမိုး at 12:07:00 am
Labels: ဇေတာရာ.., တေးထပ်
အော် သီနားစားရား မောင်ဇေ လေးးဘာလားးးးးးနော်..။
ကျိုးစားပါ.. တိုးပွားလာမှာပေါ့.. အချစ်တွေ.. အချစ်တွေ..။
ကျောင်းတက်တုန်းက အဆောင်မှာ သီချင်းလာဆိုတာကိုတောင် သတိရသွားပြီ.
လာဆိုရင်တော့ ကြွေမိမယ်ထင်တယ်..း)
ကိုလူထွေး ဆိုဒ်ကနေ လာကြည့်သွားပါတယ်၊ အားပါးတရနဲ့ အားလုံးလှန်လှောပြီးဖတ်သွားတယ်နော်။
27 May 2010 at 14:16
ကောလိပ်ကျောင်းရှိ သားထံ အမေ့ပေးစာ